तपाइँको पीसीमा आईफोन कसरी अनुकरण गर्ने मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | | म्याक, अपरेटिंग प्रणाली
सबैलाई पहिले नै थाहा छ, आईओएस यो एप्पल द्वारा विकसित अपरेटिंग प्रणाली हो। यो विशेष गरी आईफोन, आईप्याड, र आईपड टच जस्ता उपकरणहरूमा प्रयोग गर्नको लागि सिर्जना गरिएको हो। जहाँसम्म हामी जान्दछौं कि अन्य उपकरणहरूमा यसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि छ पीसीमा आईफोनको अनुकरण गर्नुहोस्.
तर हामी भागहरूमा जान्छौं। सबै भन्दा पहिले, के याद गरौं मुख्य फाइदाहरू कि आईओएस ले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गर्दछ, किन यो विश्वव्यापी रूपमा यस्तो मूल्यवान प्रणाली भएको छ। पक्षमा यी पोइन्टहरू, सबै भन्दा माथि, सुरक्षा फोल्डर र प्रयोगमा सजिलो हुन्छ, साधारण फोल्डरहरूको प्रयोगको माध्यमबाट। हामीले अन्य तर्कहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ जस्तै खेल केन्द्र (गेमरहरूको लागि आवश्यक) वा समग्र प्रदर्शनलाई असर नगरी यसको मल्टिटास्कमा गर्ने क्षमता।
MacOS को लागी उत्तम नि: शुल्क Android Emulators
प्रश्न यो छ कि जब के कोही आईओएसको फाइदाहरू लिन चाहन्छ तर के यसको लागि उपयुक्त उपकरण छैन? के म एप्पल बाहेक अर्को उपकरण प्रयोग गर्न सक्छु?
हामी यस पोष्टमा उत्तर ल्याउँछौं, र यो विशेष गरी विन्डोज अपरेटिंग सिस्टमका प्रयोगकर्ताहरूको उद्देश्यले हो, जो विश्वको सबैभन्दा ठूलो समूह व्यर्थमा छैनन्। सबै कुरा सम्भव छ को उपयोग गर्न को लागी धन्यवाद इमुलेसन टेक्नोलोजी। उनलाई धन्यवाद, हामी कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनेछौं विन्डोज,, or वा १० मा आईओएस अनुप्रयोगहरू। ठ्याक्कै मानौं यदि हामी एप्पल उपकरण प्रयोग गरिरहेका छौं।
1 आईओएस इमुलेटर के हो?
2 पीसीको लागि उत्तम आईओएस इमुलेटरहरू
2.1 एयर आईफोन इमुलेटर
3 PC मा नक्कल आईफोन: निष्कर्ष
आईओएस इमुलेटर के हो?
त्यो बुझाउनुपर्ने पहिलो प्रश्न हो: एक iOS इमुलेटर वास्तवमा के हो? विचार के हो र कसरी सञ्चालन हुन्छ, उदाहरणका लागि, पीसीमा इम्युलेट गर्ने आईफोन कार्यान्वयन हुन्छ?
सामान्यतया, यो भन्न सकिन्छ कि एक iOS एमुलेटर हो विन्डोज कम्प्युटरमा स्थापना भएको सफ्टवेयर। यो सफ्टवेयरले तपाईंलाई आईओएसको लागि कुनै विशेष अनुप्रयोग चलाउन अनुमति दिन्छ (खेलहरू पनि समावेश छन्, पाठ्यक्रम), अनुकूलता वा कार्यान्वयनको सर्तमा अवस्थित हुन सक्ने कुनै पनि समस्याहरूलाई हटाउँदै।
यो महत्वपूर्ण छ साधारण सिमुलेटरहरूबाट आईओएस इमुलेटरहरू भिन्न गर्नुहोस्। पछिल्लो, यसको नामले देखाउँदछ, कम्प्यूटर स्क्रिनमा आईओएस अनुप्रयोगको अपरेशन अनुकरण गर्न सीमित छ, यसको स्थापना र प्रयोगको सम्भावना बिना, यसको सबै विकल्पहरू र संभावनाहरूको फाइदा लिई।
पीसीको लागि उत्तम आईओएस इमुलेटरहरू
हामी यहाँ यो अपरेशन गर्न केहि उत्तम emulators को समीक्षा गर्दछौं। सात छनौट विकल्पहरू छनौट गर्नका लागि:
एयर आईफोन इमुलेटर
नामले यो सबै भन्छ। एयर आईफोन इमुलेटर यो हामीमा आकांक्षा गर्न सक्ने सब भन्दा पूर्ण अनुकरणकर्ताहरू मध्ये एक हो। यसको साथ हामी कल गर्न र प्राप्त गर्न सक्दछौं, भ्वाइस सन्देश पठाउन र सबै भन्दा माथि, डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् आईओएस अनुप्रयोग र खेलहरू तपाईंको कम्प्युटरमा।
यस अनुप्रयोगको अपरेशनको लागि कुञ्जी त्यो h हो
यो एडोबमा आईफोनको ग्राफिकल इन्टरफेस अनुकरण गर्न विकसित गरिएको छ। त्यस कारणका लागि, हामीले स्थापना गर्नुपर्नेछ एडोब एयर हाम्रो उपकरणमा। अन्यथा एयर फोन इमुलेटर प्रयोग गरेर पीसीमा आईफोन अनुकरण गर्न असम्भव हुनेछ।
यो पूर्ण नि: शुल्क र प्रयोग गर्न सजिलो उपकरण हो। यो विन्डोज / / .7.१ / १० र XP का साथ पनि उपयुक्त छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: एयर आईफोन इमुलेटर
यो क्लाउड-आधारित आईओएस इमुलेटर हो। यसको मतलब यो हो कि यसलाई तपाईंको कम्प्युटरमा कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड वा स्थापना आवश्यक छैन। Appetize.io पीसीमा आईफोन अनुकरण गर्न एक उत्कृष्ट उपकरण हो, विन्डोजको लागि धेरै व्यावहारिक आईओएस इमुलेटर।
अन्य सुविधाहरूको साथसाथै यो सफ्टवेयर पनि उपलब्ध छ लगभग नि: शुल्क। "लगभग" को मतलब के हो? हामी तपाईंलाई यो व्याख्या गर्दछौं: प्रति महिना १०० मिनेट निःशुल्क छन्। एक पटक यो सीमा नाघ्यो, तपाईंले तिर्नु पर्छ तर थोरै, केही मिनेट ($ ०.०100) प्रति मिनेट।
उल्लेखनीय सुविधाहरूले ब्राउजर अनुप्रयोग पूर्वावलोकन साथै उत्कृष्ट ग्राहक समर्थन सेवा समावेश गर्दछ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Appetize.io
BlueStacks, एक फरक इमुलेटर, तर धेरै व्यावहारिक
हुनसक्छ यो सूचीमा उल्लेखित मध्ये कम्तिमा लोकप्रिय आईओएस इमुलेटर हो। यद्यपि यो एक उपकरण हो जुन हामीलाई धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ र ध्यान दिएर लायक छ। सुरु गर्न, यो छ पूर्ण नि: शुल्क र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो। थप रूपमा, यसले प्रयोगकर्तालाई धेरै विकल्पहरू र सेटि settingsहरू प्रदान गर्दछ र उच्च डिग्रीलाई अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सही हो कि यो शब्दको कडा अर्थमा पीसीको लागि आईओएस इमुलेटर होइन, यद्यपि यो सत्य हो कि यसले हामीलाई केहि अनुप्रयोगहरू जुन केवल मोबाइल फोनका लागि उपलब्ध छन्, कि त एन्ड्रोइड वा आईओएसका लागि मात्र प्रयोग गर्दछ। यदि हाम्रो लक्ष्य मात्र छ भने, BlueStacks यो एक राम्रो विकल्प हो।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: ब्लूस्टेक्स
आईप्याडियन: धेरैका लागि, मार्केटमा पीसीको लागि उत्तम आईओएस इमुलेटर
धेरैको विचारमा, आईप्याडियन es विन्डोज १० को लागि उत्तम आईओएस इमुलेटर जुन हाल अवस्थित छ, यद्यपि यो लिनक्स र म्याक ओएस एक्स प्रणालीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यसले इम्पुलेट गर्नु भन्दा धेरै गर्छ। नामले हामीलाई एउटा सुराग दिन्छ: यो अनुप्रयोग धेरै विश्वासका साथ कम्प्यूटरमा आईप्याडको स्क्रिन पुन: उत्पादन गर्न सक्षम छ। वास्तवमा, इन्टरफेस व्यावहारिक रूपमा उही हो, पृष्ठभूमि र आइकनहरू सहित। तर एक राख्नको लागि, मात्र यो सिम्युलेटर असफल हुने कुरा टच स्क्रिन प्रणालीको नक्कल गर्ने प्रयासमा हो।
आईप्याडियन डाउनलोड धेरैको साथ छ लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू कोमो twitter, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब र अन्य। अझ बढी, यसले विन्डोजमा सबै आईओएस अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्न एक पूर्ण अनुप्रयोग स्टोर समाहित गर्दछ।
यो पनि भनिनु पर्छ कि आईप्याडियन हुन सक्छ खेल फ्यानहरूको लागि आईओएस इमुलेटरहरू बीच सबै भन्दा राम्रो विकल्प। यो मात्र होइन किनभने यो विन्डोज कम्प्युटरमा आईओएसको लागि डिजाइन गरिएका खेलहरूको आनन्द लिन सबै भन्दा राम्रो उपकरण हो, तर यो पनि किनभने यो पूर्व-स्थापित खेलहरूको धेरै आउँदछ।
La नि: शुल्क संस्करण आईप्याडियनहरूले एप्स स्टोरमा पहुँच समावेश गर्दछ। अर्कोतर्फ, भुक्तान गरिएको संस्करणले धेरै अधिक विकल्पहरू र प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै व्हाट्सएप वा स्नैपच्याटको लागि आईओएस अनुप्रयोग। र यो कि त महँगो छैन, तपाईं मात्र pay 10 तिर्नु पर्छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: आईप्याडियन
MobiOne: स्थापना प्रक्रियाको बखत वातावरणको छवि
यो सफ्टवेयर करीव years बर्ष पहिले रिलीज भएको थियो र त्यस पछि संसारभरका सयौं हजारौं प्रयोगकर्ताहरू द्वारा डाउनलोड गरिएको छ। यस सूचीमा अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै, MobiOne यसले हामीलाई विन्डोज पीसीमा आईओएस वातावरण अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ र यसले विभिन्न आईओएस अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्षम हुन्छ।
बजारमा पीसीको लागि सबैभन्दा आधुनिक आईओएस इमुलेटर नभए पनि, यस कार्यक्रमले समावेश गर्दछ अद्वितीय सुविधाहरू जसले यो धेरै चाखलाग्दो बनाउँछ। उदाहरण को लागी: यो विन्डोज को सबै संस्करणहरु संग उपयुक्त छ, खुला स्रोत प्रयोग गर्दछ, ठूलो अनुप्रयोगहरु लाई समर्थन गर्न सक्षम छ र आईप्याड को लागी अनुप्रयोग डिजाइन र परीक्षण पनि गर्न सक्छ। थप रूपमा, यसको ईन्टरफेस अनुकूलन योग्य छ, प्रभाव ट्रान्जिसनहरू सिर्जना गर्ने र ड्र्याग एण्ड ड्रप प्रकार्य कार्यान्वयन गर्ने सम्भावनाको साथ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: MobiOne
पीसी स्मार्टफेसमा आईओएस इमुलेटर
स्मार्टफेस अर्को सफ्टवेयर हो जुन हामीलाई नि: शुल्क पीसीमा आईफोन अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ। यो आफ्नो प्रकारको उत्तम अनुप्रयोगहरू मध्ये एक मानिन्छ, आईप्याड र आईफोन (आईप्याड मिनी, आईफोन,, आईफोन,, आदि) को विभिन्न संस्करणहरू नक्कल गर्न सक्षम।
यद्यपि यो शुरुआतमा विकासकर्ताहरू र प्रोग्रामरहरू द्वारा प्रयोग गर्नको लागि कल्पना गरिएको थियो, यो सामान्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि पर्याप्त पहुँच योग्य छ। वास्तवमा यसको ईन्टरफेस प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ।
यसको पक्षमा यसको एक ठूलो बिन्दु हो (जुन यसलाई स्पष्ट रूपमा बाँकी इमुलेटरहरूबाट भिन्न गर्दछ) यो हो प्रयोगकर्ता समर्थन सेवा, जुन सक्रिय रहन्छ। यो किनभने अनुप्रयोग अझै पनी विकासको क्रममा छ र हरेक पटक नयाँ प्रकार्यहरू समाहित गर्दछ। यसको बेफाइदाहरू बीच हामीले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई हाम्रो पीसीमा कनेक्ट गर्नको लागि स्मार्टफोनको कामका लागि उल्लेख गर्नुपर्दछ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: स्मार्टफिकेस
Xamarin: पीसी को लागि सबै भन्दा पूर्ण आईओएस इमुलेटर, तर सबैभन्दा जटिल
यद्यपि यो सूची वर्णानुक्रम अनुसार मिलाइएको छ, यो यति मात्र हुन्छ कि हामीले अन्तिमका लागि सबै भन्दा राम्रो बचत गरेका छौं। Xamarin एक उच्च क्षमताको सफ्टवेयर हो, विकासकर्ता र प्रोग्रामरहरूको लागि सोच्दछ। यसको मतलब यो हो कि, सिद्धान्तमा, यो औसत प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त छैन, किनकि यसको इन्टरफेस र यसको कार्यहरू तुलनात्मक रूपमा जटिल छन्।
तर यदि हामीसँग पर्याप्त ज्ञान छ, वा हामी अन्वेषण गर्न र Xamarin कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न समय खर्च गर्दछौं भने, हामीहरूको हातमा एक पूर्ण इम्युलेटर हुनेछ, एक पेशेवर उपकरण। यसको साथ, एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरूको अपरेटिंग प्रणाली अनुकरणको अतिरिक्त, हामी हाम्रो आफ्नै अनुप्रयोगहरू पनि विकास गर्न सक्दछौं।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Xamarin
PC मा नक्कल आईफोन: निष्कर्ष
प्रोग्रामहरू जुन हामीले यो सूचीमा छलफल गरेका छौं, कुनै पनि प्रयोगकर्ताले गर्न सक्दछन् तपाईंको विन्डोज पीसीमा आईओएस अनुप्रयोगहरूसँग काम गर्नुहोस्। यस तरीकाले, उपकरणहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन, केवल यसमा इमुलेटर वा इमुलेटरहरू स्थापना गर्नुहोस् र यसरी विन्डोज प्रणालीहरूबाट भर्चुअल एप्पल उपकरण पहुँच गर्नुहोस्। सरल र अतिरिक्त लागत बिना।
त्यसोभए कुन छनौट गर्ने? त्यो ज्ञान र प्रत्येकको प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ। हामी तपाईंलाई प्रत्येक एक-एक गर्न प्रयास गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं र आफैंको लागि जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको सबै भन्दा राम्रो मिल्दो छनौट गर्न छन।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » यी साधारण प्रोग्रामहरूको साथ तपाईंको पीसीमा आईफोन कसरी गर्ने
यी नि: शुल्क अनुप्रयोगहरूको साथ पीसीमा QR कोड कसरी पढ्ने